IKE MBANYE NA - AKWỤSỊ: MGBE Ị NA - ENWETA YA, KỌMPUTA AHỤ NA - EFU MAKA 1-3 SEKỌND, MGBE AHỤ Ọ NA - ARỤ ỌRỤ NKE ỌMA - DISK - 2019
Otu n'ime ihe ndị na-adịghị mma bụ ndị nwere nkwonkwo siri ike: ị na-arụ ọrụ na draịvụ ike, oge ụfọdụ ka ihe niile dị mma, mgbe ahụ ị ga-enwetaghachi ya ọzọ (mepee folda ahụ, ma ọ bụ malite ihe nkiri, egwuregwu), kọmpụta ahụ kwadoro maka 1-2 sekọnd. . (n'oge a, ọ bụrụ na ị gee ntị, ị nwere ike ịnụ ihe nkesa draịvụ ahụ na-amalite iji gbasaa) na mgbe oge nke faịlụ ị na-achọ ịmalite ...
Site n'ụzọ, nke a na - emekarị na diski ike mgbe ọtụtụ n'ime ha dị na usoro ahụ: usoro ihe a na - arụ ọrụ nke ọma, ma diski abụọ na - akwụsị mgbe ọ na - adịghị arụ ọrụ.
Oge a na-ewe iwe (karịsịa ma ọ bụrụ na i chebeghị ọkụ eletrik, nke a na-ekweta na ọ bụ naanị na laptọọpụ, na ọbụna mgbe niile). Na nke a n'isiokwu a, m ga-agwa gị otu esi m tufuo "nghọtahie" a ...
Ntọala Ike Windows
Ihe mbụ m kwadoro ka ịmalite bụ iji mee ka nrụ ọrụ kachasị mma na kọmputa (laptọọpụ). Iji mee nke a, gaa Ogwe Njikwa Windows, wee mepee akụkụ "Akụrụngwa na ụda", wee nweta "Njikwa Ike" (dika dị na Ọgụgụ 1).
Fig. 1. Ngwaọrụ na ụda / Windows 10
Ọzọ, ịkwesịrị ịga na ntọala nke ike ọkọnọ ike, wee gbanwee ntinye ike ọkọnọ ndị ọzọ (jikọta n'okpuru, lee fig 2).
Fig. 2. Gbanwee oge nke atụmatụ ahụ
Nzọụkwụ ọzọ bụ imepe taabụ "Hard Diski" ma setịpụ oge maka imechi diski ike mgbe 99999 minit. Nke a pụtara na na oge efu (mgbe PC anaghị arụ ọrụ na diski) - diski agaghị akwụsị ruo mgbe oge a kara aka gafere. Kedu, n'eziokwu, anyị chọrọ.
Fig. 3. Kwupu diski ike mgbe: 9999 nkeji
Ana m atụ aro ka ịgbanwuo arụmọrụ ma wepụ ike ịzọpụta. Mgbe ịkọwara ntọala ndị a, malitegharịa kọmputa ma hụ otú disk si arụ ọrụ - ọ na-akwụsị dị ka ọ dị na mbu? N'ọtụtụ ọnọdụ - nke a bụ iji wepu "njehie" a.
Ụlọ ọrụ maka ezigbo nchekwa / arụmọrụ
Nke a na-emetụta ihe laptọọpụ (na ngwa ndị ọzọ na kọmpat), na PC, ọ bụ nke a abụghị ...
Tinyere ndị ọkwọ ụgbọala, mgbe mgbe na laptọọpụ, na-abata uru maka ịchekwa ume (ka laptọọpụ na-agba ọsọ n'elu batrị). A naghị enwekarị ụlọ ọrụ dị otú ahụ na ndị ọkwọ ụgbọala na usoro (onye nrụpụta na-akwado ha, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nrụnye a chọrọ).
Dịka ọmụmaatụ, otu n'ime ụlọ ọrụ ndị a ka arụnyere na otu n'ime laptọọpụ m (Intel Rapid Technology, lee Ọgụgụ 4).
Fig. 4. Nkà na ụzụ Raphaịtị (arụmọrụ na ike).
Iji gbanyụọ mmetụta ya na diski ike, dịka mepee ntọala ya (akara ngosi akara, lee fig 4) na gbanyụọ njikwa njikwa onwe nke ike draịva (lee fig 5).
Fig. 5. Gbanyụọ njikwa onwe-ike
Mgbe mgbe, a ga-ewepu ụlọ ọrụ dị otú ahụ kpamkpam, na nhapụ ha agaghị enwe mmetụta na ọrụ ahụ ...
Ike nchịkwa na-echekwa draịvụ ike APM: nhazi ntụziaka ...
Ọ bụrụ na ndụmọdụ ndị gara aga enweghị mmetụta, ịnwere ike ịga n'ihu na-agbanyekwu "usoro".
Enwere 2 ihe ndị dị otú ahụ maka draịvụ ike dị ka AAM (nke na-ahụ maka ọsọ ọsọ nke draịvụ ike.) Ọ bụrụ na enweghị arịrịọ na HDD, mgbe ahụ, ụgbọala ahụ na-akwụsị (si otú ahụ na-azọpụta ike) Iji kpochapụ oge a, ịkwesịrị ịtọba uru ahụ ruo 255) na APM (na-ekpebi ọsọ ọsọ nke isi, bụ nke na-emekarị mkpọtụ na mgbatị ọsọ ọsọ.) Iji belata mkpọtụ site na diski ike - a ga-ebelata ọnụala mgbe ịkwesịrị ịgbatị ọsọ nke ọrụ - a ghaghị ịba ụba elu).
Enweghị ike ịhazi ihe ndị a, n'ihi na nke a ịkwesịrị iji ọpụrụiche. ụlọ ọrụ. Otu n'ime ndị a bụ jụụ.
Abere obere ọrụ nke na-adịghị mkpa ka a rụnye ya. Na-enye gị ohere iji aka gị gbanwee mita AAM, APM. Ọtụtụ mgbe, ntọala ndị a tọghachite mgbe a na - ebigharị PC - nke pụtara na ọ dị mkpa ka a hazie ọrụ ahụ n'otu oge ma tinye ya na ebudata ya (blọọgụ akpaaka na Windows 10 -
Usoro nke omume mgbe ị na-arụ ọrụ na quietHDD:
1. Gbaa mbọ ịba uru ma setịpụ ụkpụrụ niile dị elu (AAM na APM).
2. Gaa na nchịkwa Windows ma chọpụta onye na-ahụ maka ọrụ (naanị ị nwere ike ịchọ na nchịkwa nchịkwa, dika dị na fig 6).
Fig. 6. Onye nlekọta
3. Na nhazi ọrụ na-arụ ọrụ.
Fig. 7. Ịmepụta ọrụ
4. Na windo nke e ji rụọ ọrụ, mepee taabụ taabụ ma mepụta ihe ịmalite iji malite ọrụ anyị mgbe onye ọrụ ọ bụla na-abanye na ya (lee ọgụgụ nke 8).
Fig. 8. Ịmepụta edemede
5. Na ọrụ taabụ - gosipụta kpọmkwem ụzọ nke usoro ihe omume anyị ga-agba ọsọ (n'ọnọdụ anyị dị jụụ) ma debe uru iji "Gbaa usoro ihe omume ahụ" (dịka nke dị na Ọgụgụ 9).
Fig. 9. Omume
N'ezie, chekwaa ọrụ ahụ ma malitegharịa kọmputa ahụ. Ọ bụrụ na emezuru ihe niile n'ụzọ ziri ezi, a ga-ebido ọrụ ahụ mgbe Windows malitere. dị jụụ ma kwusi draịvụ ike ekwesịghị ...
Ọ bụrụ na diski diski na-anwa "meziwanye", mana enweghi ike (mgbe ọ na-esite na mgbe a na-anụ ma ọ bụ na-eme ka a gee ntị), mgbe ahụ usoro ahụ gwụsịrị, ọzọkwa ihe niile na-ekwughachi na gburugburu - ikekwe ị nwere nkwarụ anụ ahụ nke diski ike.
Ihe kpatara ịkwụsị draịvụ ike nwere ike ịbụ ike (ọ bụrụ na ezughị oke). Ma nke a bụ ihe dị iche iche dị iche iche ...